Ricardo Carvalho Oo si Rasmi ah ugu wareegay Real Madrid | BARTA BARTA CAYAARAHAA BARTA
← Ramires Oo Lacag Badan ay kala soo baxday Chelsea Fc
Becham Oo laga Cayriyay Qarnaka dalka England →
Ricardo Carvalho Oo si Rasmi ah ugu wareegay Real Madrid
src=”https://superz09.files.wordpress.com/2010/08/carvalhojoseg_450x3001.jpg” alt=”” title=”Carvalo sxb anigaa aduunka kubaray ee iga soo gaar meel qatar ah ayan tagaye” width=”450″ height=”300″ class=”size-full wp-image-648″ />
Carvalo sxb anigaa aduunka kubaray ee iga soo gaar meel qatar ah ayan tagaye
Naadiga weyn ee wadanka Spain Real Madrid ayaa dhamaystirtay saxiixa daafaca wadanak Portugal iyo kooxda Chelsea Ricardo Carvalho.
Ricardo Carvalho ayaa lagu iibsaday 6.7 Milyan oo gini isagoo maray tijaabada caafimaad isla markaana saxiixay hishiis labo sanno oo uu kula joogayo kooxda Real Madrid.
Ricardo Carvalho waa 32 jir waxaana uu dib ula midoobayaa tababarihiisa hore ee naadiyada Porto iyo Chelsea Jose Morrinho oo haatan ku sugan Real Madrid.
Xidigaan Ricardo Carvalho ayaa kusoo biiray naadiga Chelsea kadib markii sanadkii 2004 ay ka soo iibsatay kooxda Porto iyadoo kusoo qaadatay aduun lacageed oo dhan 19.8 Milyan wuxuuna la qaaday Saddex horyaalka ingiriiska.
Kadib lix sanno oo uu ku sugnaa garoonka Stamford Bridge Ricardo Carvalho ayaa sheegay inay fursad kale u tahay inuu mar kale ka hoos shaqeeyo tababare Morrinho.
�waxaan doonayay inaan imaado Halkan (Real Madrid) waqti dheer ayuu yiri Ricardo Carvalho oo hadlayay kadib hishiiska uu la galay Real Madrid.
Wuxuu intaa ku daray Carvalho Morrinho waa tababare guul waxaana halkan u imaaday inaan gaaro guul.
War qoraal ah oo kazoo baxay naadiga Chelsea horaantii todobaadkan ayaa lagu sheegay in kooxda Chelsea ay u mahad celinayso Riccy waa naanysta Ricardo Carvalho mudadii lixda sanno ee uu ku sugnaa kooxda isla markaana ay u rajaynayaan mustaqbal wanagsan.
Warku wuxu intaa ku daray in Ricardo Carvalho uu ahaa xidig run ah kaadi oo u qabtay kooxda shaqo wanaagsan mar kastana waan ku soo dhaweyn doonaa garoonka Stamford Bridge waxaana leenahay NASIIB WANAAGSAN RICCY WAANA MAHAD SANTAHAY.
Waayihiisa kooxda Chelsea Ricardo Carvalho wuxuu la qaaday naadiga saddex horyaal,saddex koobka FA Cup-ka,labo koobka Carling Cup-ka iyo labo jeer oo koobka Community Shield isagoo ka hor Chelsea uu kazoo hoos cayaaray Jose Morrinho oo ay ku wada guulaysteen koobka horyaalada yurub 2004 kooxda FC Porto.
Ricardo Carvalho wuxuu noqday xidigii 5-aad ee Real Madrid ay la saxiixato xiligaan kadib Angel di Maria oo u dhashay Argentina,labada xidig ee u dhalatay dalka Spain ee kala ah Pedro Leon iyo Sergio Canales iyo xidiga xulka jarmalka Sami Khedira.
War qoraal ah oo lasoo dhigay webseedka kooxda Real Madrid ayaa u qornaa sidan �caanimadiisa habkiisa wanagan ee awoodda uu u leeyahay inuu ka faa�ideeyo kubadda iyo markiisa saddexaad oo uu ka hoos shaqeeyo Tababaraheena kadib markii uu horey u soo qaaday ilaa 19 jeer kobab kala duwan Ricardo Alberto Silveira Carvalho wuxu ku biiray Real Madrid da�diisana waa 32 jir ayaa lagu yiri warka qoraalka ah ee lasoo dhigay webseedka naadiga Real Madrid.
Bishii lasoo dhaafay Ricardo Carvalho wuxuu u sheegay wargays kazoo baxa dalka Spain in uu ku riyoonayo inuu ku biro kooxda ku cayaaarta Benabeu ee Real Madrid iyo tababare Jose Morrinho.
�hadii ay suura gal noqonayso inaan u saxiixo Real Madrid waan aadayaa halkaas aan u cararo ama aan u dabaasho waan tagayaa ayuu yiri Ricardo Carvalho oo waraysi siiyay bishii lasoo dhaafay wargays kazoo baxa gudaha dalka Spain.
Wuxuu intaa raaciyay Ricardo Carvalho inuu ku riyoonayo u cayaaridda Real Madrid isla markaana uu doorbidayo ku biirista kooxda ugu wanaagsan caalamka oo uu ku shegay Real Madrid isla markaana uu ku sugan yahay tababaraha ugu wanaagsan caalamka.
�waxaa aqoon wanagsan u leeyahay Jose Morrinho waxaa lasoo qaatay labo waqti oo aan kula soo qaatay Porto iyo Chelsea waxaana fursad u heli karnaa inaan kula guulaysano Real Madrid koobka horyalada Yurub ayuu yiri Ricardo Carvalho.
Ricardo Carvalho wuxuu u cayaaray Chelsea in ka badan 200 kulan isagoo u dhaliyay 11 gool.
Wuxuu noqday xidigii 5-aad ee ka tagay Chelsea kadib Joe Cole, Michael Ballack, Juliano Belletti iyo Deco.
Comments Off on Ricardo Carvalho Oo si Rasmi ah ugu wareegay Real Madrid
Posted by Mohamed Tollman on August 13, 2010 in Uncategorized